Nin Putin aad u dhaliila oo Mosco lagu xiray - BBC News Somali
Nin Putin aad u dhaliila oo Mosco lagu xiray
Lahaanshaha sawirka @NAVALNY/TWITTER
Image caption Sawir Twitterka lagu soo qoray ayaa u muuqda Alexei Navalny oo qaba shaati buluug ah oo ay dawladdu xirayso
Hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny ayaa lagu xiray gurigiisa ka hor qorshaha aan fasaxa haysanin ee lagu doonayo in mudaaharaad lagaga dhigo magaalada Moscow, sida ay xaaskiisu sheegtay.
"Alexei waxaa laga xiray meesha laga galo guryahannaga" sidaa waxaa Twitterkeeda ku soo qortay xaaskiisa Yuliya Navalny.
Navalny ayaa mar hore taageereyaashiisa ugu baaqay in ay ka qaybgalaan mudaaharaad lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa oo lagu qabto Ruushka oo dhan.
In uu shacabka ugu baaqay in ay isugu soo baxaan bartamaha magaalada caasimadda ah ee Moscow, ayaa lagu tilmaamayaa Alexei Navalny, uu wadada u xaarayo isku dhac dhexmara xoogagga amaanka iyo dibedbaxayaasha.
Xafiiska dacwad oogaha ayaa durbadiiba sheegay in dibedbaxa lagu dhawaaqay uu yahay mid aan ogolaansho loo haysan.
Warbixin la soo saaray saqdii dhexe ka dib ayaa lagu sheegay in booliska ay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii jabisa sharciga.
Taasi micnaheedu wuxuu yahay in mar kale ay Mosco ka dhacaan wixii ka dhacay bishii Maarso oo boqolaal qof xabsiga loo taxaabay ka dib markii ay ka qeyb qaateen dibedbax si nabad gelyo ah u dhacayey, dadkaas intooda badan waxay ahayeen da'yar.
Alexei Navalny wuxuu ku doodayaa in dantu ay ku qasabtay in uu ku baaqo dibedbaxa aan ogolaashaha loo haysan, sababtoo ah ma jiri doonaan ayuu yiri shirkado ku deeqi doona shaashado, ama cid ka hadli doonto haddii dibed baxaasi la ogolaado.
Hoggamiyaha mucaaradka wuxuu ku baaqay in socod lagu maro magaalada dhaxdeeda, waana maalin laga nasanayo shaqooyinka oo lagu jiro fasax, waxayna dowladda qanqaabinaysaa xaflado ay ka mid yihiin bandhig militari oo ka dhici doona isla wadadaasi marta bartamaha caasimadda.
Guud ahaan dalka Ruushka, dibed baxyo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa ayaa lagaga dhawaaqay, waxayna u muuqdaan in ay tijaabo u yihiin taageerada uu leeyahay Alexei Navalny, kadib markii uu shaaciyey go'aankiisa ah in uu doonayo in uu u tartamo madaxtinimada dalkaasi.